ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုသူများနှင့်မုဒိမ်းကျင့်သူများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွေ့အကြုံများ (၂၀၁၉၉) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်порно
ကလေးသူငယ် Negl အလွဲသုံးစားပြုမှု။ 2008 May;32(5):549-60. doi: 10.1016/j.chiabu.2007.03.027.
Simons သည် DA1, Wurtele SK ကို, Durham RL.
269 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (137 မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့် 132 child sexual abuse) အတွက်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများတဲ့အမူအကျင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုမိဘ-Bond စစ်တမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းမေးခွန်းလွှာထံမှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူခွဲခြားအရာရှိတဦးကမှတ်တမ်းများမှရရှိသောနှင့်အမှန်ပြောစစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲမှတဆင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, child sexual abuse, ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (73%) ပိုမကြာခဏအတွေ့အကြုံများ, ညစ်ညမ်း (အသက် 65 မတိုင်မီ 10%), (အသက်အရွယ် 60 မတိုင်မီ 11%) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခုအစောပိုင်းကစတင်ခြင်းစောစောထိတွေ့မှုအစီရင်ခံတင်ပြ တိရိစ္ဆာန်များ (38%) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ။ child sexual abuse မတူဘဲ, မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (68%) ပိုမကြာခဏအတွေ့အကြုံများ, မိဘအကြမ်းဖက်မှု (78%), စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှု (70%), နှင့်တိရိစ္ဆာန်များမှရက်စက်မှု (68%) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်သူများနှင့်မုဒိမ်းကျင့်သူများ (> ၉၃%) က၎င်းတို့ကလေးဘဝတွင်အကြမ်းဖက်မီဒီယာများနှင့်မကြာခဏထိတွေ့မှုရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အများစုမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (94%) မလုံခြုံမိဘပူးတွဲမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရှိခြင်းဖော်ပြထား; မုဒိန်းမှုကျူးလွန် 76% ကိုရှောင်ကြဉ်မိဘ attachment များကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် child sexual abuse ၏ 62% စိုးရိမ်ပူပန်မိဘ attachment များကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ဒီလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်ကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းအတွက် etiological အချက်များအဖြစ်တိကျတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏အခန်းကဏ္supportကိုထောကျပံ့။ ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုသမိုင်းကြောင်းကိုပိုမိုမြင့်မားသောလိင်မှုလက္ခဏာများဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဓမ္မပြုကျင့်သူများ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရာဇ ၀ တ်မှုများသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုပိုမိုပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကလိင်အကြမ်းဖက်သူများကိုကုသရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ရန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို maladaptive နည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ဆည်းရန်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုပြုလုပ်နေသည်။ စွန့်စားရမှုပုံစံများသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုအန္တရာယ်မြင့်မားသောအခြေအနေများမှရှောင်ရှားရန်သင်ကြားပေးသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တီထွင်ခဲ့သည့်နည်းဗျူဟာများကိုကိုင်တွယ်ရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။ အစားအစား, ကုသမှု၏အာရုံစိုက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ထုံးစံ၌ဤလိုအပ်ချက်များကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့အသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူပြစ်မှုကျူးလွန်သူတပ်ဆင်ဖို့ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပုံစံသည်သူတို့အားတစ် ဦး ချင်းစီအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းစရာမလိုဘဲကျန်းမာသောဘ ၀ ကိုနေထိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။